October 2, 2021 - ApannPyay Media
စက်သုံးဆီ စျေးများ အဆမတန် တက်ခြင်းကြောင့် မြင်းစီး၍ နွားနို့ပို့နေသော အမျိုးသား
October 2, 2021 by ApannPyay Media
စက်သုံးဆီ စျေးများ အဆမတန် တက်ခြင်းကြောင့် မြင်းစီး၍ နွားနို့ပို့နေသော အမျိုးသား နောင်ချိုမြို့မှာ မြင်းစီးပြီးတော့ နွားနို့လိုက်ပို့နေတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ ဒီကနေ့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ မျှဝေမှုတွေ များပြားနေခဲ့ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ မြင့်တက်လာတဲ့ ဒေါ်လာစျေးနှုန်းနဲ့အတူ စက်သုံးဆီစျေးနှုန်းတွေဟာလည်း စက်တင်ဘာလ ၂၈ကနေစတင်ပြီး ပြည်သူတွေ လက်လှမ်းမှီနိုင်တဲ့ စျေးနှုန်းထက်ပို ပိုမိုမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ စက်သုံးဆီဆိုင်တွေမှာ ပြည်သူအများအသုံးပြုတဲ့ 92.95 ဓာတ်ဆီတွေဟာ ဝယ်မရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားပြီး ဆီဆိုင်အချို့ ပိတ်သိမ်းထားရအပြီးမှာ အခုလို မြင်းစီးပြီး နွားနို့ပို့နေတဲ့ အမျိုးသားရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ပြည်သူတွေက သဘောကျနေကြပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလည်း မော်တော်ယာဉ်၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကို သိမ်းဆည်းကာ စက်ဘီးစီးကြမယ်ဆိုတဲ့ မျှဝေမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာ အခုလို မြစ်စီးပြီး နွားနို့ပို့တဲ့ အမျိုးသားရဲ့ပုံကို လူကြိုက်များနေကြတာပါ။ ဓာတ်ပုံ-နန်းယု … Read more
ဖော်.မ.လင် သုံးထားလား သိနိုင်မဲ့အချက် ဖော်မလင်ပါခဲ့မယ်ဆိုရင် ခေတ်မီတိုးတက်လာခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးလို့ ဆိုရမလားပဲ။ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ သီးနှံ့တွေမှာ ဖော်မလင် သုံးလာကြတယ်။ အမြဲတမ်းလတ်ဆတ်နေအောင်ပေ့ါ။ အခုဆိုရင် သီးနှံ့တွေတင် မဟုတ်တော့ဘူး။ သားငါးတွေမှာပါ သုံးလာကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီလို သုံးစွဲမှုတွေကို ပရိတ်သတ်ကြီး ဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်မလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေး တစ်ခုကို ပြောပြပေးပါ့မယ် ဖော်မလင် သုံးထားလား သိနိုင်မဲ့အချက် အကြမ်းအားဖြင့် သုံးထားမထား စစ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ ငါးတွေ ဟာ ပျော့ပြောင်းမနေဘဲ မာနေမယ်ဆိုရင် သေချာပါတယ်။ ဖော်မလင် သုံးထားပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး သေချာတာကတော့ ယင်မအုံတော့သလို၊ ပုရွက်ဆိတ်တွေလည်း မလာတော့ပါဘူး။ ဒ့ါကြောင့် ဈေးထဲမှာ ငါးတွေဟာ ဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် မဝယ်တာအကောင်းဆုံးပါ။ တကယ်လို့ ဝယ်ခဲ့မိရင်ရော ……. အသားတွေ ငါးတွေ အသီးတွေကို … Read more
နှုတ်ခမ်းသားလေး ပန်းရောင်သမ်းပြီး နူးညံ့လှပနေဖို့ အုန်းဆီ အသုံးပြုနည်း
နှုတ်ခမ်းသားလေး ပန်းရောင်သမ်းပြီး နူးညံ့လှပနေဖို့ အုန်းဆီ အသုံးပြုနည်း အုန်းဆီက အသားအရေအတွက်ရော ဆံကေသာအလှအပအတွက်ပါ အသုံးတည့်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှုတ်ခမ်းသားလေး နူးညံ့ပြီး သဘာဝအတိုင်း ပန်းရောင်သမ်းနေစေဖို့လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံနည်းလမ်းလေးတွေကတော့ အများအပြားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ နည်းလမ်းတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ နည်းလမ်း (၁) အုန်းဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ ဂျိုဂျိုးပါး အဆီ ၅ စက်ခန့်ကို သမအောင် ရောမွှေပေးလိုက်ပါ။ ထို့နောက် ဘူးအလွတ်တစ်ဘူးထဲမှာ ထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာ အအေးခံစက်ထဲမှာ မိနစ် ၂ဝကနေ မိနစ် ၃၀ ခန့်အထိ အအေးခံထားလိုက်ပါ။ ရရှိလာတဲ့အဆီကို နှုတ်ခမ်းမှာ သုတ်လိမ်းပေးလိုက်ပါ။ နည်းလမ်း (၂) အုန်းဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်နှင့် Vaseline အလှဆီ … Read more
ခေတ်ပျက်ကို ရောက်နေပြီလားဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အတိတ်နိမိတ်များ
ခေတ်ပျက်ကို ရောက်နေပြီလားဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အတိတ်နိမိတ်များ ကြက်တွေအိပ်တန်း မမှန်တော့ရင်၊ ကျီးတွေညပိုင်း အော်ဟစ်ဆူညံကြရင်၊ ခွေးတွေနေ့ညအူသံပေးရင် သေချာပြီခေတ်ပျက်မယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိထားမိကြရဲ့လား။ ကြက်တွေအိပ်တန်း မှန်နေသေးရင်၊ ကျီးတွေအရုဏ်မတက်ခင်မှာ အသံကြားနေရရင်၊ ခွေးတွေနေ့ညရက်ဆက် အူသံမကြားရရင် ခေတ်ဆိုတာမပျက်သေးဘူးဆိုတဲ့နိမိတ်ပါပဲ။ ဒါကိုရှေးပညာရှိတွေက ခေတ်ပျက်ခြင်းနိမိတ်သုံးမျိုးဆိုပြီး ကဗျာလေးစီထားခဲ့ကြပြန်တယ်။ “ရောခွေးဒုကြက်ဝဂ်သတ်” တဲ့။ ရောခွေးဆိုတာက ရောဂန္တရရောဂါကပ်ဘေးကြီးတစ်ခု ကျရောက်လာတော့မယ်ဆိုလျှင်တဲ့ နိမိတ်တစ်ခုအနေအားဖြင့် တစ်လောကလုံးမှာရှိကြတဲ့ ခွေးတွေဟာလမ်းမပေါ်ကိုထွက်ကြပြီး နေ့ညမပျက်အူနေကြသတဲ့။ ဒုကြက်ဆိုတာက ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း ကပ်ကြီးတစ်ခုကျရောက်တော့မယ်ဆိုလျှင်တဲ့ နိမိတ်တစ်ခုအနေအားဖြင့် တစ်လောကလုံးမှာရှိကြတဲ့၊ ကြက်တွေဟာ အိပ်တန်းမမှန်ကြတော့သလို ကျီးတွေဟာလည်း နေ့ညမပျက်အော်ဟစ်ပြီးတော့နေကြသတဲ့။ ဝဂ်သတ်ဆိုတာက ဝဂျဆိုတာဝဂ္ဂဆိုတဲ့ ပါဠိကနေလာတာ။ အဓိပ္ပါယ်က အပေါင်းစုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဝဂ္ဂဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အသင်းတွေပေ့ါ။ တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့၊ တစ်သင်းနဲ့တစ်သင်း၊ တစ်ရွာနဲ့တစ်ရွာ၊ တစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့၊ ညီညွတ်ခြင်းတွေမရှိတော့ရင်၊ ခိုက်ရန်ဒေါသတွေဖြစ်ပွားလာရင်၊ သတ္တန္တရလက်နက်ကပ်ဘေးကြီး … Read more
NLD အစိုးရကို ဒေါ်လာဈေးတွေတက်ပြီး ကန်စွန်းရွက်တစီး ၃၀၀ ဖြစ်ကုန်လို့ လှောင်ပြောင်ဖူးတဲ့ ဖိုးသောကြာဘယ်ပျောက်နေတုန်း ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်ဖိုးသောကြာကဒေါ်လာငွေဈေးတက်လို့NLDအစိုးရကိုအခုလိုဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နော်။ဖိုးသောကြာကလူကြီးမင်းတို့ရေ၊အနိမ့်ဆုံးကန်စွန်းရွက်တစ်စည်း၃ဝဝဖြစ်နေပြီ၊ဒေါ်လာဆိုတာကြီးကလည်း၁၄ဝဝကျော်နေပြီ၊ကြည့်လုပ်ကြပါဦးဗျာ၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား၊မသိကျိုးကျွန်ပြုနေတာလား။ဘာမှမလုပ်တတ်တာလား၊လား၊လား၊လားဆိုပြီးတော့… သူရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာအခုလိုရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ NLD အစိုးရကို ဒေါ်လာဈေးတွေတက်ပြီး ကန်စွန်းရွက်တစီး ၃၀၀ ဖြစ်ကုန်လို့ လှောင်ပြောင်ဖူးတဲ့ ဖိုးသောကြာဘယ်ပျောက်နေတုန်း ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်ဖိုးသောကြာကဒေါ်လာငွေဈေးတက်လို့NLDအစိုးရကိုအခုလိုဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နော်။ဖိုးသောကြာကလူကြီးမင်းတို့ရေ၊အနိမ့်ဆုံးကန်စွန်းရွက်တစ်စည်း၃ဝဝဖြစ်နေပြီ၊ဒေါ်လာဆိုတာကြီးကလည်း၁၄ဝဝကျော်နေပြီ၊ကြည့်လုပ်ကြပါဦးဗျာ၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား၊မသိကျိုးကျွန်ပြုနေတာလား။ဘာမှမလုပ်တတ်တာလား၊လား၊လား၊လားဆိုပြီးတော့… သူရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာအခုလိုရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ NLD အစိုးရကို ဒေါ်လာဈေးတွေတက်ပြီး ကန်စွန်းရွက်တစီး ၃၀၀ ဖြစ်ကုန်လို့ လှောင်ပြောင်ဖူးတဲ့ ဖိုးသောကြာဘယ်ပျောက်နေတုန်း ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်ဖိုးသောကြာကဒေါ်လာငွေဈေးတက်လို့NLDအစိုးရကိုအခုလိုဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နော်။ဖိုးသောကြာကလူကြီးမင်းတို့ရေ၊အနိမ့်ဆုံးကန်စွန်းရွက်တစ်စည်း၃ဝဝဖြစ်နေပြီ၊ဒေါ်လာဆိုတာကြီးကလည်း၁၄ဝဝကျော်နေပြီ၊ကြည့်လုပ်ကြပါဦးဗျာ၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား၊မသိကျိုးကျွန်ပြုနေတာလား။ဘာမှမလုပ်တတ်တာလား၊လား၊လား၊လားဆိုပြီးတော့… သူရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာအခုလိုရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit NLD အစိုးရကို ေဒၚလာေဈးေတြတက္ၿပီး ကန္စြန္း႐ြက္တစီး ၃၀၀ ျဖစ္ကုန္လို႔ ေလွာင္ေျပာင္ဖူးတဲ့ ဖိုးေသာၾကာဘယ္ေပ်ာက္ေနတုန္း ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ဖိုးေသာၾကာကေဒၚလာေငြေဈးတက္လို႔NLDအစိုးရကိုအခုလိုေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ဖိုးေသာၾကာကလူႀကီးမင္းတို႔ေရ၊အနိမ့္ဆုံးကန္စြန္း႐ြက္တစ္စည္း၃၀၀ျဖစ္ေနၿပီ၊ေဒၚလာဆိုတာႀကီးကလည္း၁၄၀၀ေက်ာ္ေနၿပီ၊ၾကည့္လုပ္ၾကပါဦးဗ်ာ၊ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာလား၊မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳေနတာလား။ဘာမွမလုပ္တတ္တာလား၊လား၊လား၊လားဆိုၿပီးေတာ့… သူရဲ႕လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာအခုလိုေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္၊စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ NLD အစိုးရကို ေဒၚလာေဈးေတြတက္ၿပီး ကန္စြန္း႐ြက္တစီး ၃၀၀ ျဖစ္ကုန္လို႔ ေလွာင္ေျပာင္ဖူးတဲ့ ဖိုးေသာၾကာဘယ္ေပ်ာက္ေနတုန္း ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္ဖိုးေသာၾကာကေဒၚလာေငြေဈးတက္လို႔NLDအစိုးရကိုအခုလိုေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ဖိုးေသာၾကာကလူႀကီးမင္းတို႔ေရ၊အနိမ့္ဆုံးကန္စြန္း႐ြက္တစ္စည္း၃၀၀ျဖစ္ေနၿပီ၊ေဒၚလာဆိုတာႀကီးကလည္း၁၄၀၀ေက်ာ္ေနၿပီ၊ၾကည့္လုပ္ၾကပါဦးဗ်ာ၊ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာလား၊မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳေနတာလား။ဘာမွမလုပ္တတ္တာလား၊လား၊လား၊လားဆိုၿပီးေတာ့… … Read more
ဆေးဖက်ဝင် ဖရဲသီးအစေ့ တကယ်အံ့မခန်းပါပဲ
ဆေးဖက်ဝင် ဖရဲသီးအစေ့ တကယ်အံ့မခန်းပါပဲ ဖရဲစေ့ အစွမ်း အံ့မခန်းဖရဲသီးအစေ့ထဲမှာ ပရိုတင်း ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် ဖက်တီးအက်ဆစ် ဗီတာမင်နှင့် သတ္ထုဓာတ်တွေ ပြည့်ဝစွာ ပါရှိနေပါတယ်။ ဖရဲစေ့ ၁၀၀ ဂရမ်မှာ ကယ်လိုရီ ၆၀၀ ရှိပါတယ်။ ဖရဲသီးအစေ့ကိုအစိမ်းလိုက်ဝါး၍သော်လည်းကောင်းပြုတ်၍သော်လည်းကောင်း. လှော်၍သော်လည်းကောင်း ဖရဲစေ့ကို အခြောက်လှန်း အမူန့်လုပ်ပြီး ရေနွေးကြမ်းသောက်၍သော်လည်းကောင်း ဆေးဖက်ဝင်အောင် အမျိုးမျိုးစားသုံးလို့ရပါတယ်။ ဖရဲစေ့စားလို့ လူကိုဘေးဥပါဒ် မဖြစ်စေပါဘူး သို့သော် အစေ့ကိုအစိမ်းလိုက်ဝါးစားတဲ့အခါမှာတော့ အခွံခွာ၍ညက်ညက်ကျေအောင် ဝါးစားပေးဖို့လိုပါတယ် ဒါမှသာ ဖရဲစေ့ကအစာချေလမ်းကြောင်းက ပြန်ထွက်မလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ( ၁ ) – ဆံပင်အတွက် ဖရဲစေ့ ဖရဲစေ့ထဲမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တွေပါရှိနေတာကြောင့် ဆံသားကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ အစေ့ထဲမှာပါတဲ့ သံဓာတ်က ဆံပင်ကိုအားဖြစ်စေပြီးဆံပင်ကိုရှည်ထွက်ခြင်းကို ကောင်းစွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။သံဓာတ်ကဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ဆံပင်ခြောက်၍ အရောင်မွဲခြောက်ခြင်းမှလည်း … Read more
နေအိမ်တအိမ်တွင် ဝက်ခြံကာထားတဲ့ ပိတောက်တိုင်မှာ ပိတောက်ပန်းများ ထူးခြားစွာ ပွင့်နေစဉ်
နေအိမ်တအိမ်တွင် ဝက်ခြံကာထားတဲ့ ပိတောက်တိုင်မှာ ပိတောက်ပန်းများ ထူးခြားစွာ ပွင့်နေစဉ် မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတို့တောင်ကျေးရွာမှ နေအိမ်တအိမ်တွင် ဝက်ခြံကာထားတဲ့ ပိတောက်တိုင်မှာပိတောက်ပန်းများပွင့်နေစဉ်-မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတို့တောင်ကျေးရွာမှ နေအိမ်တအိမ်တွင် ဝက်ခြံကာထားတဲ့ ပိတောက်တိုင်မှာပိတောက်ပန်းများပွင့်နေစဉ်-မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတို့တောင်ကျေးရွာမှ နေအိမ်တအိမ်တွင် ဝက်ခြံကာထားတဲ့ ပိတောက်တိုင်မှာပိတောက်ပန်းများပွင့်နေစဉ်- မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတို့တောင်ကျေးရွာမှ နေအိမ်တအိမ်တွင် ဝက်ခြံကာထားတဲ့ ပိတောက်တိုင်မှာပိတောက်ပန်းများပွင့်နေစဉ်-မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတို့တောင်ကျေးရွာမှ နေအိမ်တအိမ်တွင် ဝက်ခြံကာထားတဲ့ ပိတောက်တိုင်မှာပိတောက်ပန်းများပွင့်နေစဉ်-မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတို့တောင်ကျေးရွာမှ နေအိမ်တအိမ်တွင် ဝက်ခြံကာထားတဲ့ ပိတောက်တိုင်မှာပိတောက်ပန်းများပွင့်နေစဉ်- မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတို့တောင်ကျေးရွာမှ နေအိမ်တအိမ်တွင် ဝက်ခြံကာထားတဲ့ ပိတောက်တိုင်မှာပိတောက်ပန်းများပွင့်နေစဉ်-မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတို့တောင်ကျေးရွာမှ နေအိမ်တအိမ်တွင် ဝက်ခြံကာထားတဲ့ ပိတောက်တိုင်မှာပိတောက်ပန်းများပွင့်နေစဉ်-မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကတို့တောင်ကျေးရွာမှ နေအိမ်တအိမ်တွင် ဝက်ခြံကာထားတဲ့ ပိတောက်တိုင်မှာပိတောက်ပန်းများပွင့်နေစဉ်- Source -An Naing 36myanmarchannel ေနအိမ္တအိမ္တြင္ ဝက္ၿခံကာထားတဲ့ ပိေတာက္တိုင္မွာ ပိေတာက္ပန္းမ်ား ထူးျခားစြာ ပြင့္ေနစဥ္ … Read more
အပ်ထားသမျှ ပိုက်ဆံအကုန် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမထုတ် ပေးရင်သမီးသိမ်းမယ်ဆိုပြီးဉီးအောင်ကိုဝင်းထံခြိမ်းခြောက် စာပို့ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ် ကာစတန်မာတစ်ဦး အပ်ထားသမျှ ပိုက်ဆံအကုန် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမထုတ် ပေးရင်သမီးသိမ်းမယ်ဆိုပြီးဉီးအောင်ကိုဝင်းထံခြိမ်းခြောက် စာပို့ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ် ကာစတန်မာတစ်ဦး အပ်ထားသမျှ ပိုက်ဆံအကုန် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမထုတ် ပေးရင်သမီးသိမ်းမယ်ဆိုပြီးဉီးအောင်ကိုဝင်းထံခြိမ်းခြောက် စာပို့ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ် ကာစတန်မာတစ်ဦးအပ်ထားသမျှ ပိုက်ဆံအကုန် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမထုတ် ပေးရင်သမီးသိမ်းမယ်ဆိုပြီးဉီးအောင်ကိုဝင်းထံခြိမ်းခြောက် စာပို့ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ် ကာစတန်မာတစ်ဦး အပ်ထားသမျှ ပိုက်ဆံအကုန် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမထုတ် ပေးရင်သမီးသိမ်းမယ်ဆိုပြီးဉီးအောင်ကိုဝင်းထံခြိမ်းခြောက် စာပို့ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ် ကာစတန်မာတစ်ဦးအပ်ထားသမျှ ပိုက်ဆံအကုန် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမထုတ် ပေးရင်သမီးသိမ်းမယ်ဆိုပြီးဉီးအောင်ကိုဝင်းထံခြိမ်းခြောက် စာပို့ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ် ကာစတန်မာတစ်ဦး အပ်ထားသမျှ ပိုက်ဆံအကုန် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမထုတ် ပေးရင်သမီးသိမ်းမယ်ဆိုပြီးဉီးအောင်ကိုဝင်းထံခြိမ်းခြောက် စာပို့ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ် ကာစတန်မာတစ်ဦးအပ်ထားသမျှ ပိုက်ဆံအကုန် တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းမထုတ် ပေးရင်သမီးသိမ်းမယ်ဆိုပြီးဉီးအောင်ကိုဝင်းထံခြိမ်းခြောက် စာပို့ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ် ကာစတန်မာတစ်ဦး အပ်ထားသမျှ ပိုက်ဆံအကုန် … Read more
အသားညိုသူတွေအတွက် အသားအရေ ကြည်လင်စေမယ့် ပေါင်းတင်နည်း
အသားညိုသူတွေအတွက် အသားအရေ ကြည်လင်စေမယ့် ပေါင်းတင်နည်း အသားညိုသူတွေအတွက် အသားအရေ ကြည်လင်စေမယ့် ပေါင်းတင်နည်း (၅) ခု အသားဖြူသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသားညိုသူပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာ အသားအရေ ကြည်လင် ဝင်းပနေခြင်းဟာ မိတ်ကပ်လိမ်း ပြင်ဆင်ခြယ်သထားခြင်းထက် ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်။ အသားညိုသူတွေအနေနဲ့ အသားညိုတာကို ဖြူစင်ဝင်းပအောင် ပြုလုပ်ခြင်းထက် အသားအရေ ကြည်လင်တောက်ပအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်းက ဆွဲဆောင်မှု ပိုမိုရှိစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အသားညိုသူတွေအတွက် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်မယ့် မျက်နှာပေါင်းတင်နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) နနွင်း၊ ပျားရည်နဲ့ သံပုရာ ပေါင်းတင်နည်း နနွင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ ပျားရည် လက်ဖက်ရည် ၁ ဇွန်းနဲ့ သံပုရာရည် အနည်းငယ်တို့ကို ရောစပ်ထားတဲ့ အနှစ်ကို မျက်နှာအနှံ့ လိမ်းကျံပေးပြီး … Read more
ခံဝန်ထိုးရင် ပြန်လွတ်ပေးမယ်ဆိုတာကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီးထောင်ထဲမှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ပြေတီဦးတို့ဇနီးမောင်နှံ
ခံဝန်ထိုးရင် ပြန်လွတ်ပေးမယ်ဆိုတာကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီးထောင်ထဲမှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ပြေတီဦးတို့ဇနီးမောင်နှံ နိုင်ငံရေးသမားတွေထပ် သစ္စာပိုရှိကြောင်း ပြသခဲ့တဲ့ ပြေတီဦးနှင့် မအူဝဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ်မှာသတင်းသုံးနေသော ပိုင်တံခွန်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးက စစ်ကောင်စီနဲ့ ညှိနိူင်းပြီး အပြင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားပေးခဲ့ရာ ခံဝန်ကတိလက်မှတ်ထိုးပေးရင် ထုတ်ပေးမယ် ဆိုသဖြင့်လက်မှတ်မထိုးခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံပါ မှားပါတယ် နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး ဆိုပြီးခံဝန်လက်မှတ်ထိုးပေးရင် လွှတ်ပေးမယ် လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှ ပြောရာ နှစ်ဦးလုံးကလက်မှတ် မထိုးဘဲ ထောင်ထဲမှာပဲ ဆက်နေမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြောင်း အတွင်းသတင်းတွေက တဆင့်သိရပါတယ်။ ခံဝန်ထိုးရင် ပြန်လွတ်ပေးမယ်ဆိုတာကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီးထောင်ထဲမှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ပြေတီဦးတို့ဇနီးမောင်နှံ နိုင်ငံရေးသမားတွေထပ် သစ္စာပိုရှိကြောင်း ပြသခဲ့တဲ့ ပြေတီဦးနှင့် မအူဝဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ်မှာသတင်းသုံးနေသော ပိုင်တံခွန်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးက စစ်ကောင်စီနဲ့ ညှိနိူင်းပြီး အပြင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားပေးခဲ့ရာ ခံဝန်ကတိလက်မှတ်ထိုးပေးရင် ထုတ်ပေးမယ် ဆိုသဖြင့်လက်မှတ်မထိုးခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံပါ မှားပါတယ် နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး … Read more